Isboortiga xilliga qaboobaha ee Isbaanishka: qaar ka mid ah goobaha barafka lagu ciyaaro | Ragga Stylish
Goobaha barafka lagu ciyaaro ee Iski
Guud ahaan dadka jecel barafka waxay soo jiitaan xilliyada qabow, iyo xitaa in ka sii badan haddii barafka yimaado.
Isbaanishka waxaa ku yaal meelo badan oo barafka lagu ciyaaro, meelo waxay u oggolaadaan inay ku tababaraan tiro badan oo isboorti buur ah.
1 Maxay yihiin meelaha lagu nasto ee ugu fiican Isbaanishka?
1.5 Foomka Panticosa
Maxay yihiin meelaha lagu nasto ee ugu fiican Isbaanishka?
Maadaama xilliyada qabow oo dhan aysan la socon baraf, waa muhiim muhiim tixgeli kuwa bixiya heerarka ugu fiican ee loogu talagalay madaddaalada bannaanka.
Saldhigga Baqueira Beret waa mid ka mid ah meelaha la aqoonsan yahay ee barafka, sidoo kale leh dalab ballaaran. Waxay ku taal El Valle de Arán, oo ku taal gobolka Lleida.
Badanaa waa rugta ugu booqashada badan Spain sababtoo ah wadada 155km, oo waliba loo habeeyay heerar kala duwan iyo dookhyo.
Waxay ku taalaa wax ka yar 40 km caasimada, idaacadan waxay ku taalaa gobolka Granada. Intaa waxaa u dheer isagoo ku dhowaad 110 km si looga boodboodoWaxay sidoo kale leedahay saadaasha hawada oo aad u fiican, sidaas awgeedna u oggolaaneysa heerkulka ugu wanaagsan ee lagu tababbari karo cayaartan.
Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa fursado badan oo baraf ah inta lagu jiro habeenkii, waxayna leedahay dhowr madadaalo iyo aagag qoys.
Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan waxaana loo calaamadeeyay inay tahay meesha ugu fiican ee lagu ciyaaro barafka ee Isbaanishka sababo la xiriira meesha ay ku taallo Aragnaanka Pyrenees. Xisaab iyada oo ku dhowaad 80 km laga gudbi karo waxayna bixisaa fursado madadaalo sida:
Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira ku hareereysan muuqaal qurux badan oo ah waxay u keentaa nasasho iyo xasillooni dhammaan dadka soo booqda.
Midka ugu horreeya ee goobaha barafka lagu ciyaaro ee Isbaanish Waxay ku taal dhinac dhinac ka mid ah Webiga Aragón, gudaha Aragonese Pyrenees, iyo waxay leedahay ku dhowaad 40 Km oo laga gudbi karo.
Waa dalxiiska ugu ballaaran Spain, oo leh ku dhowaad 180 Km oo la jabi karo, waxayna ku taalaa Huesca gudaha Aragonese Pyrenees. Saldhigani wuxuu leeyahay waxqabadyo badan oo kala duwan oo loogu talagalay qoyska oo dhan, oo ay ku jiraan xannaanada carruurta yaryar.
Musharax xarunta ciyaaraha olimbikada jiilaalka dhowr sano gudahood, waxay leedahay 50 kiiloomitir oo la rogi karo adeegyo aad u tiro badan, sida:
Ilaha sawirka: Autobild.es / Esquiar
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Goobaha barafka lagu ciyaaro ee Iski
Fikradaha in la isku daro garkaaga bunni ee jiilaalka